आहा बिचार Archives - Page5of 10 - AahaSanchar
Home आहा बिचार (Page 5)
एमएल ओली तमाँई हाम्रो समाजमा ढोक्को महत्व कम्ता छैन । यसमा अरु क्षेत्र जस्तो अनियमित्ता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार होला भनिकन कसैले पनि नचिताए हुन्छ । अरुवास्तो भया भन्नु तमाँई हाम्रो निम खर्रै छ तेइभइन नगरी कर्रै छ । यसलाई दानापानी र ओक्तो मूलास्तो आज बिर्सिया पनि भोली खाउँला भनिकन म्याँत…
रुकुम (पश्चिम) मुसिकोट नगरपालिका ४ सोलाबाङ्ग बजारको व्यवस्थापनको विषयमा के कस्ता सवालहरु उठिरहेका छन त ? प्रस्तुत छ,संवाददाता फलिराम विश्वकर्माले त्यहाँका विभिन्न व्यक्तिसँग भेटेर तयार पारिएको आहा जनमत । नगरले गाडिको व्यवस्था गरेको छैन ? भेषराज महतारा : सरसफाई आफै गर्नुपर्छ । नगरपालिकाले गाडिको व्यवस्थान पनि गरेको छैन । आफ्नो…
हरि जिज्ञासु हाम्रो नेपाली समाजमा पहिले देखिनै मंसिर महिनामा विवाह गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बलियो धारणाले जरो गाडेको देखिन्छ । त्यसैले अरु महिनाहरु भन्दा मंसिर महिनामा धेरै जोडीहरु बैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका हुन्छन् । प्रेम विवाह होस् या मागि विवाह होस् विवाहको लागि मंसिर कुर्नुपर्ने प्रचलन नेपालमा छ । सडक बजारमा हिड्ने…
खेमराज खड्का रुकुम जिल्लाको परिबेशमा क्रान्तिकारी राजनीति सगै २०४६ सालको जनआन्दोलनको जगबाट उभिएर संघर्षको धरातलका एक जुझारु संघर्षका सिपाहि तथा एक क्रान्तिकारी परिर्वतनका संवाहक ब्यक्ति जो की यो मुलुकको आमुल परिवर्तनका खाँतिर रुकुमेली धर्तीमा जन्मिए । सिज अभियानसगै मितेरी गाँस्दै मुक्तिमा मृत्युको प्रवाह नगरी देश र दुनियालाई बदल्ने सपना र…
लालबहादुर केसी हाल सरकारी अर्थात सामुदायिक विद्यालय र नीजि विद्यालय विचका विभिन्न फरकहरुको वारेमा जताततै बहस र छलफल हुने गरेको पाईन्छ । बिशेष गरी भौतिक पुर्वाधार, शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासुविधा, शैक्षिक प्रशासन, आर्थिक लगानी र शिक्षणशिकाई क्रियाकलाप तथा अन्तिम आउने नतिजाका वारेमा छलफल र बहस हुनेगरेको पाईन्छ । विशेष गरी…
एमएल ओली तमाइको जारोलाई चिसो, ठण्डा तथा सर्दी पनि भनिन्छ हेर्नोई । जारो किन भन्नियो होला ? खोजी गर्दै जाँदा यो जार जस्तै भएकोले जारो भएछ भन्नु हुन्च । यसले जारो लाग्ने, कम्प छुटाउने, जुर्जुरे लाग्ने, तातोपना पटक्कै नदेखाउँने, नाक्चोबाट सिकानको मूल फुटाउने, बृद्धबृद्धालाई भोक उठाउने, जोइपोइलाई टुटाउने लगाइतका लक्षिण…
पहलसिंह घर्तिमगर १. सामान्य परिचय : नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको इतिहासमा अग्रणी भूमीका निर्वाह गर्ने रुकुम जिल्लाको भौगोलिक संरचना आज दुई भागमा विभाजित भएको छ रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिमका रुपमा । शदिऔंदेखि शामन्ती शोसन र उत्पीडनका जराहरुलाई दशवर्षे नेपाली जनयुद्ध र त्यसको जगमा स्थापित १९ दिने जनआन्दोलनको वलमा उखेलिएपछि नेपाली…
स्तम्भ : ह्याँती गर्ने कुरा एम.एल. ओली एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पैदल वा कुनै सवारी साधनद्वारा जाने कार्यलाई यात्रा भनिन्छ । यो यात्रा विभिन्न उद्देश्य बोकेर गरिन्छ जस्तै ः पर्यटक बनी घुम्मघाम्म, डुल्लडाल्ल, हेरफेर, भ्रमणस्रमण आदि गर्नु यात्रा हो । तमाईको धार्मिक उद्देश्यले तीर्थ गर्नु धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक उद्देश्यले घुम्नु…
एमएल ओली हजुरका मुख्या चारपर्वहरूलाई पठाउनु पर्दा अल्तै निस्याइलो भयो होला ? निस्याइलो मात्रै हो र ? तित्तो, पिर्रो, टर्रो र कर्रो समेत भयो भन्नु हुन्च । बल्लै भन्न हँुन्न, माथ्याले पनि कत्नाम्रो बिदासिदा कटौती गराइकन सुबिदा बढौती गर्देइका थ्या । ठूलाठूलीया हातबाट चायाजति दान पाइन्त्यो, मान आइन्थ्यो, मीठोमस्नो खाइन्थ्यो,…
पहलसिंह घर्तीमगर अध्यक्ष, संस्कृति तथा पर्यटन विकास केन्द्र नेपाल रुकुम । १.घलेगाउँ होमस्टे सम्बन्धी एक परिचय नेपाली समाजको परिवर्तन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पश्चात वनेको गण्डकी प्रदेश अन्र्तगत पर्ने लमजुङ्ग जिल्लाको सदरमुकाम वेशी शहरबाट उत्तर–पश्चिममा अवस्थित घलेगाउँ पुग्न जीपको यात्राबाट करिव ४ घण्टाको वाटो हिडेपछि आईपुग्छ घलेगाउँ अर्थात गुरुङ्ग…